၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မနက်ပိုင်းအချိန်တွင် တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် အခြားသောပါတီဝင်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေသည် နိုင်ငံ‌တော်အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာခဲ့ပြီး တပ်မ‌တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံ အာဏာလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းယူမှု ဖြစ်ပွားပြီး မကြာမီတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေါ်ကီတော်ကီပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဦးဝင်းမြင့်ကို ကိုဗစ်ကာလ၌ ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်း‌ကြောင့်လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များကို မလိုက်နာခြင်းကြောင့် ထပ်မံတရားစွဲခဲ့ပြန်သည်။၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ထိ စစ်အစိုးရအားဆန့်ကျင်သူများအား အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၂၀ ကျော်ရှိပြီး ဖမ်းဆီးခံရသူ၆၈၀၀ကျော်ရှိသည်ဟု AAPPနှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများတွင်တွေ့ရသော်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှာငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်လွှတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် တိုင်းပြည်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ နှင့် ၁၉၆၀ အကြားတွင် တပ်မတော်သည် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုအစား တိုင်းပြည်ကို‌ခေတ္တအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် အာဏာသိမ်းပိုက်ပိုက်ခဲ့‌လေသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အရေးအခင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရာ ဦးနေဝင်းအစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့လေသည်။ သို့သော် တပ်မတော်ဦးစီးသော နအဖအဖွဲ့သည် ချက်ချင်းအာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရွှေးကောက်ပွဲကို ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ရာ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အနိုင်ရခဲ့လေသည်။ သို့သော်တပ်မတော်သည် ထိုရလဒ်များကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခဲ့သည်။
ဖိုင်:Myanmar coup 2021 protest in Bangkok Thailand 01.jpg
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးအရှေ့၌ အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကိုဆန္ဒပြနေကြစဉ်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလူမျိုးအ‌ယောက် ၂၀၀ ခန့်နှင့် အချို့သော ထိုင်းဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် တက်ကြွသူများသည် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲကို ရဲတပ်‌ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး နှစ်ဦး ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရသည်။
↑ ၇၄.၀ ၇၄.၁ Could Min Aung Hlaing’s retirement break the political deadlock? (in en-US) (12 January 2021)။ 30 January 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၆.၀ ၇၆.၁ General Min Aung Hlaing is the ambitious army chief and international pariah who seized power in Myanmar (in en)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၇.၀ ၇၇.၁ Who profits fromacoup? The power and greed of Senior General Min Aung Hlaing။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၉.၀ ၇၉.၁ Lawder၊ David။ "Days before coup, IMF sent Myanmar $350 million in emergency aid; no precedent for refund" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-03။6February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5February 2021။
↑ ၈၀.၀ ၈၀.၁ Lawder၊ David။ "IMF says members to guide decision on whether to recognize Myanmar's military leaders" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-05။6February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2021။
↑ ၈၆.၀ ၈၆.၁ Kate Abnett။ China, Russia undermine international Myanmar response, EU's top diplomat says။ 13 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၃.၀ ၉၃.၁ Crouch၊ Melissa (2021-02-02)။ The power and ambition behind Myanmar’s coup (in en)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၅.၀ ၉၅.၁ ၉၅.၂ After coup, medical workers spearhead civil disobedience campaign (in en-US) (2021-02-02)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉၇.၀ ၉၇.၁ Emergency Powers in Myanmar (in en) (2021-02-01)။ 1 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၃.၀ ၁၀၃.၁ ၁၀၃.၂ ၁၀၃.၃ Teachers, students join anti-coup campaign as hospital staff stop work (in en-US) (2021-02-03)။ 19 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၅.၀ ၁၀၅.၁ Myanmar’s Medics Launch Civil Disobedience Campaign Against Coup (in en-US) (2021-02-03)။ 23 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃၁.၀ ၁၃၁.၁ ၁၃၁.၂ Staff၊ Reuters။ "Myanmar internet providers block Facebook services after government order" (in en)၊ Reuters၊ 2021-02-03။
↑ ၁၄၁.၀ ၁၄၁.၁ ၁၄၁.၂ Thailand's Amata halts $1bn Myanmar property project after coup (in en-GB)။3February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄၇.၀ ၁၄၇.၁ Japan's Kirin ends Myanmar beer tie-up with army-owned partner after coup။5February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၀.၀ ၁၆၀.၁ အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက တပ်ပျက်နေကြောင်း ပုန်ကန်သူတပ်အရာရှိပြောကြား (in my)။ 25 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆၁.၀ ၁၆၁.၁ Beech၊ Hannah။ "Inside Myanmar's Army: 'They See Protesters as Criminals'" (in en-US)၊ The New York Times၊ 2021-03-28။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 26 April 2021။
↑ ၁၆၂.၀ ၁၆၂.၁ Interview: 'Military Leaders Are Afraid of Letting Their Power Go' (in en)။ 25 April 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၂၁_မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းခံရခြင်း&oldid=725326" မှ ရယူရန်
၂၀၂၀ ဆယ်စုနှစ် အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။